Xawaaree, internetka ku xawaaraha ugu sarreeya | Wararka IPhone
Xawaaree, internet xawaare buuxa ku samee codsigan loogu talagalay iPhone-kaaga
Juan Colilla | | Wararka IPhone, Barnaamijyada IPhone, Noticias
Maanta waa maalin ku weyn dadka isticmaala iPhone (iyo Android), waxaan hubaa in inbadan oo idinka mid ah (aniga oo kale) waligood ay soo mareen dhibaatooyinka la xiriirtaada Wi-Fi, ama xasilooni daro awgeed, xawaare ama xadka oo dhan, dhibaatadaadu ha ahaato, maanta waxaan kuu keenay xalka.
Xalka ayaa loo yaqaan Kordhin, oo waxay u timid in la isku daro Wi-Fi-ga iyo isku xirka xogta si dhakhso leh, la isku halleyn karo oo xasilloon oo xiriir leh.
Faallada caqliga leh ee kooxdu way boodaysaa iyagoo leh “taas waxaa horay u soo bandhigay Apple oo leh iOS 9 iyo shaqadeeda Kaaliyaha Wi-Fi", ku dhowaad Laakiin maya.
Apple waxay isla soo bandhigtay iOS 9 waxa loo yaqaan Kaaliyaha Wi-Fi, markii la hawlgeliyo, shaqadani waxay u oggolaaneysaa iPhone-keena ama iPad-ka inay adeegsadaan xiriirkooda xogta marka shabakadda Wi-Fi ee aan ku xirneyn aysan xasillooneyn, si kale haddii loo dhigo, markaan taabano xadka baaxadiisa.
Speedify way kaga duwan tahay taas sameynta isku-darka waxtarka leh ee labada shabakadood, iyo sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad adigu u habeysid si aanaan aakhirka u cambaareyn Apple isticmaalka badan.
Speedify wuxuu abuuraa muuqaal VPN ah kaas oo ku xiraya mid ka mid ah adeegeyaasheeda ugu dhow (ama midka aan doorano) wuxuuna u adeegsadaa tikniyoolajiyadiisa si uu u kordhiyo waxqabadka isku xirkeena
Iyadoo Speedify, waxaan dejin karnaa mudnaanta iyo xadkaTusaale ahaan, waxaan u dejin karnaa isku xirka Macluumaadka inuu yeesho mudnaanta "Backup" oo aan u adeegsanno kaliya marka isku xirnaanta Wi-Fi uusan ku filneyn, ama waxaan dooran karnaa mudnaan sare haddii qorshahayaga xogtu uu ka deeqsi badan yahay isla markaana labada shabakadoodba ka shaqeeyaan mar kasta oo xiriir loo baahdo.
Intaas waxaa dheer, waxaan dhisi karnaa a Xadka isticmaalka xogta ee (tusaale ahaan) 1GB bishii iyo / ama 100MB maalintii (oo wax laga beddeli karo isticmaalaha), sidan ayaan u hubineynaa in marka ku xirnaanshaheena Xogtu uu gaaro xadkaan, uu joojiyo isticmaalka, sidaas darteedna aynaan arkin wax lala yaabo oo ku eg bisha.
On kombiyuutarada iyo Mac Speedify ayaa muddo socdayWindows ahaan, tusaale ahaan, waxay kuu ogolaaneysaa inaad adeegsato shabakado badan oo Wi-Fi ah oo aad ku xirmi karto, isku darka iyo u isticmaalidda wixii loo baahdo, inaad awood u leedahay inaad xitaa ku darto xiriir xog iyadoo la adeegsanayo USB (casrigayaga ama modem) .
Waxaas oo dhami waxay muujinayaan faa'iidooyin cad, kooxdayadu waxay gaari doonaan a xawaare sare soo dejinta iyo soo dejinta adoo adeegsanaya dariiqyo kala duwan, waxaan sidoo kale heli doonnaa a xasilloonida weyn awood u lahaanshaha sii wadida adeegsiga shabakad kale hadduu mid guuldareysto iyo xitaa kordhin xawaaraha taas oo is dul saaran oo isku xigxigta ku dareysa shabakadaha badan ee aan ku darnay.
Nasiib darrose, taleefannadeenna casriga ah waxaan isticmaali karnaa oo keliya 2 shabakadaha isla mar ahaantaana, shabakadda Wi-Fi iyo shabakadda Xogta, si kastaba ha noqotee waxaan hubaa inay ka badnaan doonto ku filan isticmaal kasta oo aan qiyaasi karno, ka fikirno Netflix ama YouTube iyada oo aan la kala goynin, ciyaaraha tooska ah ee daahitaanku hooseeyo, soo degsashada degdegga ah ee isku xira shabakadaha Wi-Fi ac oo leh isku xirka xogta LTE / 4G, fursadaha aan dhamaadka lahayn.
Waxa ugu fiican dhammaan? Adeegsiga codsigan ayaa ah GRATIS, waxaan uga faa'iideysan karnaa iyada oo xaddidan 1GB ee taraafikada bil kasta bilaash ah, haddii aan u baahanahay wax badan, waxaan kala dooran karnaa inta aan sanduuqa dhex marayno ama aan la wadaagno arjigan asxaabteena, sidaa darteed waxay na siin doonaan awood aad iyo aad u badan saaxiibo badan ayaa ku soo biiraya xiriirkeena tixraaca.
Waad awoodaa soo dejinta app hoose:
Dab ka riixo kuwa ku riixaya oo noo sheeg sida ay u egtahay ku socodka internetka xawaare sublight ah; Shaki la'aan, barnaamijkani wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo loo ciyaaro (tusaale ahaan, isku darka barnaamijkan iyo adeegga Awazza).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Xawaaree, internet xawaare buuxa ku samee codsigan loogu talagalay iPhone-kaaga
djchucky 39 dijo
Hoos u dhaadhac oo iskuday hehehe mahadsanid.
Muxuu ahaa daandaansi app ah. Waxaa jira dookh durba gudahood iOS 9.2 ee "taageerada Wi-Fi". Ikhtiyaar ah, habka, nuugaya qadarka xogta ee fiican.
Kuuma oggolaan doono inaad sameysato koonto.
Ok laakiin haysashada VPN waqtiga oo dhan ma cuni doono batari badan ???
Ku jawaab Iver
Ilo cusub ayaa sidoo kale xaqiijinaya in iPhone 7 uusan lahaan doonin deked 3.5mm ah
Griffin's BreakSafe waa MagSafe oo ka maqan 12-inch Macbook